သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် အမိုက်စားဗွီဒီယို အမြည်းလေးတင်ပေး လိုက်တဲ့ နန်းမွေစံ – Zartiman
မော်ဒယ်နန်းမွေ့စံ ကတော့ Hello Guys!!! မွေစံ ရဲ့ video အမိုက်စားကို အမြည်းတင်ပေးလိုက်တယ် ဆိုပြီး အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ နဲ့အတူ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထား ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အသည်းယားစရာပုံစံလေးနဲ့ လှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေဟာ ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေ ပိုစေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံရဲ့ အမိုက်စား ပုံစံလေးနဲ့ ကြွေလောက် စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါပုံရိပ်လေးတွေကို အောက်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံ ကတော့ လက်ရှိမှာ အောင်မြင်လျက်ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်လ်တွေ ထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး အနုပညာအလုပ် တွေကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေကာ ကြော်ငြာတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးလျက်ရှိနေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေကို ဝတ် ဆင်လေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုရော ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုပါ အ ခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ ကို လူမှုကွန် ယက်စာမျက်နှာထက် တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင် အမာရယူထားနိုင်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ် တွေရဲ့ အချစ်တော်လေး ဆို ရင်လည်း မမှားပါဘူး။ သူမကတော့ ယခုမှာ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှတရား လေးပေါ်လွင်နေပြီး အမိုက်စား ပိုစ့်လေးတွေပေးနေခဲ့ပါတယ်။
မျောဒယျနနျးမှစေံ့ ကတော့ Hello Guys!!! မှစေံ ရဲ့ video အမိုကျစားကို အမွညျးတငျပေးလိုကျတယျ ဆိုပွီး အမိုကျစား ပုံရိပျလေးတှေ နဲ့အတူ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျမှာ ရေးသားထား ခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ အသညျးယားစရာပုံစံလေးနဲ့ လှပနတေဲ့ ပုံရိပျလေး တှဟော ပရိသတျတှကေို အခဈြတှေ ပိုစခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ မျောဒယျလျနနျးမှစေံရဲ့ အမိုကျစား ပုံစံလေးနဲ့ ကွှလေောကျ စရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပွီး အဆိုပါပုံရိပျလေးတှကေို အောကျမှာကွညျ့နိုငျပါတယျ။
မျောဒယျလျနနျးမှစေံ ကတော့ လကျရှိမှာ အောငျမွငျလကျြရှိနတေဲ့ မျောဒယျလျတှေ ထဲမှာ တဈယောကျအပါအဝငျဖွဈပွီး အနုပညာအလုပျ တှကေို လုပျကိုငျလကျြရှိနကော ကွျောငွာတှကေိုလညျး ရိုကျကူးလကျြရှိနသေူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ အမိုကျစားဖကျရှငျလေးတှကေို ဝတျ ဆငျလရှေိ့တဲ့ သူမကတော့ မိနျးကလေး ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျ အားပေးမှုရော ယောကျြားလေး ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကိုပါ အ ခိုငျအမာရယူထားနိုငျခဲ့တဲ့ မျောဒယျလျတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။
အမိုကျစား ပုံရိပျလေးတှေ ကို လူမှုကှနျ ယကျစာမကျြနှာထကျ တငျပေးလရှေိ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို အခိုငျ အမာရယူထားနိုငျသူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးအလှကို ပိုငျဆိုငျထားနိုငျခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတျ တှရေဲ့ အခဈြတျောလေး ဆို ရငျလညျး မမှားပါဘူး။ သူမကတော့ ယခုမှာ အလနျးစား ဖကျရှငျလေးကွောငျ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အလှတရား လေးပျေါလှငျနပွေီး အမိုကျစား ပိုဈ့လေးတှပေေးနခေဲ့ပါတယျ။
ကကွက်ဆန်းတွေနဲ့ ပုရိသတွေရင်ဖိုအောင် လုပ်ပြနေတဲ့ နန်းမွေ့စံရဲ့ဗွီဒီယို
ကိုယ်ကျပ်ဝတ်စုံလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ ချစ်စရာကောင်းနေ တဲ့ အိချောပို၏ အမိုက်စားပုံရိပ်များ
ရင်ဖိုစရာကောင်းလောက်အောင် ကောက်ကြောင်းအလှတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ခင်အင်ကြင်းကျော်၏ ပုံရိပ်များ